Madrid : Firaisankina Teraka Avy Amin’ny Sisanà Korontam-Baton’ny Trano Iray Noravàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2015 17:23 GMT
Noforonina mba hialana amin'ny fanilihana ny bilaogy fanentanana Ofelia Nieto — nalaina tamin'ny anaran'ny làlana nisy ilay trano. Efa matetika no vitan'ireo mpikatroka mafàna fo ny nampihemotra ny fanilihana, tamin'ny alàlan'ny fitobiana teny an-toerana, ny fanaovana fanangonan-tsonia ary fikarakarana fivoriana. Manazava ny antony nandravana ny trano ilay bilaogy :
Mbola mampametraka fanontaniana ny maha ara-dalàna ny fidirana an-tsehatra sy ny fisamborana. Nomelohin'ny Periodismo Humano, gazety iray azo fidina ao anaty aterineto, miaraka amin'ny Mpanao gazety tsy voafehin'ny sisintany (RSF) ny famelezana ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra izay nitarika ny fisamborana ny mpanao gazety Jaime Alekos, izay nanadihady nandritra ny taona maro ny fanilihana tao Espaina :
Lahatsary roa, ny iray voalohany noraketin'ny olomn-tsotra mpanao gazety Juan Carlos Morh ny andron'ny fanilihana, ary ny faharoa nataon'ilay mpanao gazety voasambotra, samy maneho ny fidiran'ny mpitandro filaminana an-tsehatra tamin'ilay hetsika fanilihana ary ny fanohanan'ny mponina ireo fianakaviana voahilika :
Vaovao nalaza tamin'ny fotoan'andro ny hetsika tahaka izany tany Barcelone sy Burgos tamin'ny taona lasa. Nisy vondronà olom-pirenena niaraka nanangana indray ny foibe sosialy mizakatenan'ny Can Vies taorian'ny andrana fandravana ilay tranobe tamin'ny volana Novambra 2014 tany amin'ny distrikan'i Sants tany Barcelone. Tany Burgos, tao amin'ny faritra manodidina an'i Gamonal, hetsi-panoherana mahery vaika nandritra ny 21 andro tamin'ny volana Janoary no nahasakanana ny fanorenana ilay làlam-be izay mitentina 8,5 tapitrisa Euros (9,1 dolara Amerikana eo ho eo )